Apocalipsis 19 MTDS - Adiyisɛm 19 AKCB
Nnipakuw A Wɔwɔ Ɔsoro No Ani Gye
1Eyi akyi no, metee nne bi te sɛ nnipakuw a wɔwɔ ɔsoro teɛ mu se,
Nkwagye ne anuonyam ne tumi wɔ yɛn Nyankopɔn,
2efisɛ nʼatemmu yɛ nokware,
na eye sɛ obuu oguamanfo kɛse
a ɔde nʼaguamammɔ asɛe asase no atɛn.
Onyankopɔn atwe nʼaso, efisɛ okum nʼasomfo.”
3Na afei wɔteɛɛ mu bio se,
Wusiw befi kurow no mu akɔ ɔsoro daa daa.”
4Mpanyimfo aduonu anan ne ateasefo baanan no butubutuu Onyankopɔn a ɔte nʼahengua so no anim som no. Na wɔteɛɛ mu se,
5Afei nne bi fi ahengua no so bae se,
“Monkamfo yɛn Nyankopɔn,
mo a moyɛ nʼasomfo nyinaa,
mo a musuro no,
akɛse ne nkumaa!”
6Afei metee nne bi te sɛ nnipadɔm a ɛte sɛ asuworo ne aprannaa a ɛrepaapae a ɛteɛ mu se,
Yɛn Tumfo Awurade Nyankopɔn di hene.
7Momma yɛn ho nsɛpɛw yɛn na yɛn ani nnye
na yɛnhyɛ no anuonyam
efisɛ Oguamma no ayeforohyia adu
a nʼayeforokunu asiesie ne ho.
8Wɔde nwera pa a ani hyerɛn na ani tew
maa no sɛ ɔnhyɛ.”
(Nwera no kyerɛ ahotefo trenee nneyɛe.)
9Afei ɔbɔfo no ka kyerɛɛ me se, “Kyerɛw sɛ, Nhyira nka wɔn a wɔato nsa afrɛ wɔn wɔ Oguamma no ayeforohyia anwummere aponto ase.” Ɔka kaa ho se, “Eyi yɛ Onyankopɔn asɛm turodoo.”
10Mibutuw ne nan ase pɛɛ sɛ mesom no. Nanso ɔka kyerɛɛ me se, “Nyɛ saa, efisɛ meyɛ ɔsomfo te sɛ wo ne wo nuanom a wodi Yesu ho adanse no. Som Onyankopɔn efisɛ nokware a Yesu daa no adi no na ɛhyɛ adiyifo no nkuran.”
11Afei mihuu sɛ ɔsoro abue a ɔpɔnkɔ fitaa wɔ hɔ. Na nea ɔte ne so no din de “Ɔseadeɛyɛ ne Ɔnokwafo.” Nokware na ogyina so bu atɛn na ɔko ne ko. 12Nʼaniwa te sɛ ogya a ɛredɛw na ɔhyɛ ahenkyɛw bebree. Na ɔwɔ din bi a wɔakyerɛw agu ne ho, nanso na obiara nnim din no nkyerɛase ka ne ho. 13Na ɔhyɛ atade bi a wɔde anu mogya mu. Na ne din ne “Onyankopɔn Asɛm” 14Ɔsoro asraafo a wɔhyehyɛ nwera fitaa a ani tew a wɔtete apɔnkɔ fitafitaa so dii nʼakyi. 15Afoa a ano yɛ nnam yiye a ɔde bedi aman so no fii nʼanom bae. Dade pema na ɔde bedi wɔn so. Sɛnea wotiatia bobe a ɛwɔ nsakyiamoa mu no so no, saa ara na obetiatia nnipa no so de akyerɛ Onyankopɔn Tumfo no abufuw. 16Na wɔakyerɛw din agu nʼatade mu ne ne srɛ ho se,
Ahene mu Hene ne Awuranom mu Awurade.
17Afei, mihuu ɔbɔfo bi a ogyina owia mu. Ɔteɛɛ mu guu nnomaa a wɔnam wim nyinaa so se, “Mommra mmehyia mu wɔ Onyankopɔn aponto kɛse no ase. 18Mummedi ahemfo nam ne asafohene nam ne atumfo nam ne apɔnkɔ ne wɔn sotefo nam ne adehye ne nkoa ne akɛse ne nketewa nyinaa nam.”
19Afei mihuu aboa no ne asase so ahene ne wɔn asraafo a wɔaboa wɔn ho ano rekɔko atia nea ɔte ɔpɔnkɔ no so no ne ne dɔm. 20Wɔkyeree aboa no ne nʼatoro adiyifo a ɔyɛɛ anwonwade maa no no. Saa anwonwade no so na ɔnam daadaa wɔn a wɔde aboa no ahyɛ wɔn agyirae ne wɔn a wɔsom aboa no honi no. Wɔtow aboa no ne atoro adiyifo no anikann guu ogya ɔtare a sufre na na ɛredɛw wɔ mu no mu. 21Wɔde afoa a efi ɔpɔnkɔkafo no anom kunkum wɔn asraafo, na nnomaa no dii wɔn nam sɛnea wobetumi.
AKCB : Adiyisɛm 19